Gacmo-gacmeedka DIY | October 2019
Nidaamka canabkiisa ee xilliga dayrta waa mid xiiso leh oo aan nidaamsaneyn.
Editor Ee Doorashada October 24,2019
Ugu Weyn Ee Gacmo-gacmeedka DIY
Sida loo sameeyo suxuunta iyo alaabta xusuusta ee lagenii
Lagenaria waa warshad si fiican loo yaqaan ee bocorka qoyska, kaas oo lagu beeray jawi kulaylaha iyo subtropical. Hindiya, Afrika iyo Aasiyada Aasiyada ayaa loo tixgeliyaa inay tahay goobta lagu magacaabo Lagenaria. Bocadan ayaa loo yaqaanaa nin tan iyo wakhtiyadii hore. Sababtoo ah xaqiiqda ah in bocorka loo isticmaalo loogu talagalay soo saarista suxuunta, waxa ay heshay magaceeda labaad - bocorka saxanka.
Wax soosaarka madaxbannaan ee Fokin daaradlayda
Beer beerta oo leh dhul-gooyo, oo aan loola jeedo dhulalka dhulka, oo qashinka loo ilaaliyo oo dhulka ka ilaaliya cimilada iyo qalajinta, ayaa muddo dheer la yaqaan (dhammaadkii qarnigii 19aad, I E. Ovsinsky ayaa lagu guulaystay). Isla mar ahaantaana, korodhka dhalidda iyo hoos u dhaca tirada shaqada ee la adeegsaday ayaa la duubay.
Sida loo sameeyo boorashyada taayirada: fasal heer sare ah oo leh sawirro
Mulkiilayaasha baabuurta badan ee garaashka boodhka gaboobay - iyaga oo tuuraya ama caajis ah, ama mar, ama si ula kac ah loo hayo haddii ay si lama filaan ah u yimaadaan. Taayirada hore waxaa badanaa loo isticmaalaa inay abuuraan xuduudaha, sariiraha ubaxyada ubaxyada, qalabka isboortiga iyo goobaha lagu ciyaaro ama abuuritaanka qurxinta asalka ah ee beerta iyo barxadda.
Sida loo qurxiyo shimbir shimbir
Hadda waa wax aad u fudud in la iibsado ama shimbirta shimbirahaaga ka samayso alaabta wax lagu duubo. Oo sidaas daraaddeed ma u muuqdaan kuwo ku caajis ah, waxaad qurxin kartaa iyada oo leh kala duwan oo farshaxan. Carruurtu waxay jecelyihiin habkan, sababtoo ah halkan waxay muujin karaan fikradooda oo dhan. Aynu tixgelinno waxa qalabku u qurxin karo nuujiyaha, iyo waxa ka wanaagsan inaanan isticmaalin.
Sida loo sameeyo qolofta guriga lagu sameeyo si loogu quudiyo
Quudinta isku dhafan ayaa la cunaa noocyo badan oo xayawaanka beeraha ah, iibsashada raashinka ma aha mid raqiis ah. Marka la eego, beeraley badani waxay jecel yihiin in ay isku duba ridaan iskudhafkooda, si ay u kaydsadaan kaydka, waxay doorbidaan unugyada guriga ee mashiinka warshadaha. Sida loo sameeyo granulator, fahmid maqaalkan.
Sida loo daryeelo oo u koro tayada beerta
Digaagdarrada jilicsan ee reer galbeedka
Qaababka Culinaryarada - intee in le'eg ayaad ku karsan kartaa tufaaxa barafoobay? Tallaabada Talaabooyinka Talaabada
Doorashada ubaxyada buluuga ah ee sariirta dalka
Sida loo xoqdo digir cagaar ah jiilaalka
Waxaa ka mid ah noocyo kala duwan ee basbaas macaan, aad si gooni ah u dooran kartaa "Dib dhegaha". Kala duwanaanta noocaas ah waxay ku jirtaa mid ka mid ah jagooyinka ugu sareeya ee qaybtan. Dhadhaminta, muuqaalka cuntada iyo gaadiidka wanaagsan waxay ku daraan dadka caanka ah ee xagaaga. Maqaalkani, waxaan tixgelineynaa sharaxaadda, astaamaha, astaamaha daryeelka iyo beeritaanka noocyo kala duwan. Read More
Sida loola tacaalo cayayaanka kufsiga
Sidee loo waxyeeleynin dhirta: miyuu suurtogal yahay in la soo celiyo orchid dayrta iyo sida loo sameeyo si sax ah?
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Gacmo-gacmeedka DIY 2019